Madaxweynaha oo faray laamaha amniga inay sugaan Amniga Musharaxiinta – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha oo faray laamaha amniga inay sugaan Amniga Musharaxiinta
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqey inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada guud ee dalka, gaar ahaan waqtigan xasaasiga ah ee doorashada.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa looga hadlay amniga doorashooyinka, iyadoo la faray Hey’adaha ammaanka iyo AMISOM inay dar dar geliyaan sugida amniga doorashooyinka.
“Cadowga naf la caariga ah waxaa uu xaqiiqsadey in Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdey, shacabkuna ay cagta saareen waddadii nabadda, horumarka iyo barwaaqada, Hadaba cadowga isagoo ka xun guulahaasi la gaarey waxaa isku dayi doonaa inuu carqaladeeyo doorashada iyo wax walba oo dan u ah ummadda. Sidaa darteed waa in loo midoobaa sidii looga hortegi lahaa” ayuu yiri Madaxweynaha.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada waxaa ka go’an inay cadowga ka suuliyaan qeyb kasta oo dalka ka mid ah, iyadoo ay taasi jirto,ayaa haddana waxaa la qaadi doonaa tallaabooyin gaar ah oo nabadda lagu sugayo waqtiga doorashada. Ciidammada Soomaaliya oo gacan ka helaya saaxibada aan leenahay ayaana hawshaasi adag u diyaar ah inay qabtaan’’ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa ugu baaqey qeybaha bulshada rayidka, warfaafinta, culumada iyo aqoonyahanada inay shacabka iyo dowladda kala qeyb qaataan sidii loo sugi lahaa amniga goobaha doorashooyinka.
Beesha Caalamka oo bixisay qeyb kamid ah lacagta ku baxeysa Doorashada Soomaaliya